Jeed-jeedsiga Jeenyo iyo Jilicsanaanta Xiriirka. | HimiloNetwork
Jeed-jeedsiga Jeenyo iyo Jilicsanaanta Xiriirka.
Posted by: Zakariya in Faallooyinka September 19, 2017	0 209 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Todobo bil gudahood ayay kooxda LLPP Jeeyo labo mar ku dhawaaqday in ay iskaga baxday labada tartan ee ugu xiisaha badan kubadda cagta Soomaaliya. Bishii Maarso ee sanadkan ayay aheyd markii ay ku dhawaaqday in ay ka baxday tartanka horyaalka heerka koobaad oo markaas marayey halkii ugu xiisaha badnaa.
Kala xiriir: cabdicaziiz149@gmail.com
Xaqiiqooyinka ku saabsan BAKEYLAHA
Cafis loo fidiyay Nin Gidaar Masjid ku qoray ereyo nac-Islaam ku dhisan.